Nzira yekusarudza yakanakisa Zvemukati maneja (CMS)? | ECommerce nhau
Nzira yekusarudza yakanakisa Zvemukati maneja (CMS)?
Kuzvipira mukusarudza a CMS inogona kureva kutambisa nguva uye kunonoka mukuzadzisa zvinangwa zvewebsite yako. Naizvozvo, kusarudza maneja wezvemukati akanakisa, zviri nyore kuti utarise kurudziro inotevera.
Kazhinji, pane zvinhu zvitatu izvo zvinofanirwa kutariswa pakusarudza maneja wezvekushandisa webhusaiti yako.
1. Chii chaunoziva kare?
Kana uchitova nazvo yakashanda neWordPress Asati, kunamatira neiyi yekutsikisa chikuva chewebsite yako inotevera kunogona kuwedzera kugadzirwa kwako. Kana iwe uri mugadziri, kusarudza yakakosha CMS kunogona kudzikisira kugona kwako.
2. Ndeipi dhatabhesi uye script mitauro yauchazoshandisa?
Kana uine ruzivo kushanda nePHP uye MySQL, zvinogona kuve zvine pundutso kusarudza zvemukati maneja zvinoenderana neJava semuenzaniso. Mamwe maCMS akasununguka zvakanyanya kuLinux kana Windows.
3. Uri kuenda kunowedzera here zvimwe zvekushandisa?
Vazhinji mamaneja emukati anogona kuve inowedzerwa kuburikidza nemapulagini kana ekuwedzera-ons, iyo inogona kutoshandura yako yega blog kuita yakazara inoshanda e-commerce saiti, hurukuro hurukuro, kana peji rewebhu. Naizvozvo, kana iwe uine zvirongwa zvesaiti yako kuyera uye kupa mamwe maficha, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti CMS yaunosarudza ine rutsigiro rwekuitwa kwemamojuru, mawedzero-kana mapulagi ekuvandudza mashandiro.
Kune akawanda zvemaneja maneja ayo anogona kushandiswa kubata peji rewebhuNekudaro, kiyi kune zvese kusarudza sarudzo chaiyo yebasa rinoenderana chaizvo nezvimiro, zvinowedzerwa, uye kugadzikana zvinoda kana saiti yako saiti.
WordPress, Joomla, Drupal, DynPG, Exponent, Magento, Django, nezvimwe, ndivo mamaneja emukati ayo ega ega anopa akasiyana mabasa, maficha uye maturusi. Kuita yako tsvagiridzo pane yega yega kunogona kukubatsira iwe kuona yakanyanya kunaka sarudzo
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Nzira yekusarudza yakanakisa Zvemukati maneja (CMS)?
Basics yeOne-Peji Kugadziridza yeEcommerce
Iyo blog inobatsira sei yako Ecommerce?